Vaovao - Famintinana ny fampirantiana tamin'ny septambra
NY Valo-polo (2020) CHINA ANIMAL HUSBANDRY EXPO
Amin'ity foara ity dia manamboatra milina roa ao amin'ny booth izahay.
Item No. .: MT-101-3
Anarana: Masinina fanaovana naoty atody sy fonosana
1. Fahafahana: atody 25000-30000 isan'ora
2. Mifandraisa amin'ny tsipika fanangonana afovoany na ny tsipika famokarana fanasana atody
3. Fametahana lanja ny lanjan'ny atody ary alefa mandeha ho azy, ampifanaraho mialoha ny loha lehibe, tombony amin'ny fitehirizana.
4. LCD efijery mikasika, mora ny mamaritra ny lanjan'ny isa isan-karazany.
5. Mety amin'ny lovia taratasy atody 30 na lovia plastika.
6. denester mandeha ho azy na denère semi-automatique
MT-101 Fanaingoana atody sy masinina fanangonana atody dia natao hihaonana amin'ny fitakiana "rocket" amin'ny fahombiazana sy fahasalamana ara-tsakafo amin'ny fikarakarana atody. Ny fiaraha-miasa fatratra amin'ireo mpanjifantsika dia mahatonga ny masininay ho malaza kokoa eny an-tsena ary hanampy antsika hahita fahombiazana bebe kokoa. Azo ampiana ny fanamboarana azo atao satria misy ny modular modular system. Mety amin'ny toby famonosana atody sy fiompiana atody akoho. Nahazo zavatra mahaliana mandritra ny foara.
Masinina fonosana atody MT-110S, antsoina koa hoe packer farm. Izy io dia mahazaka atody 25000-30000 isan'ora. Tena malaza amin'ny fiompiana sosona. Ampifandraiso mivantana ny tsipika fanangonana afovoany, ampidirina ho azy ny atody, ahena ny enta-mavesatra.
Namidy sombin-javatra maherin'ny 200 ireto masinina ireto, saika isaky ny faritanin'i Sina no ahitanao ny masininay. Azontsika atao ny mandamina ny fitsidihana amin'ny fotoana rehetra. Aza miverina intsony. Mpanjifa maro no manadihady izany mandritra ny foara.
Ity Fair ity dia nasehonay ihany koa ireo mpanangona fonosinay tao amin'ny booth. Satria mbola niparitaka erak'izao tontolo izao ny Covid-19, dia tsy nanam-potoana hitsidihana ity foara ity ny mpanjifa avy any ivelany. Saingy mbola nahazo fitsidihana maro izahay.
Enga anie isika hihaona amin'ny Next CHINA ANIMAL HUSBANDRY EXPO sy VIV Qingdao 2021.
Masinina fonosana atody, Masinina mamaky atody mandeha ho azy, Masinina manendaka atody nandrahoina, Masinina manasokajy sy milina fanangonana, Hatching atody Packer, Mpanamboatra masinina mamaky atody,